Baarlamaanka DFS oo la filayo in Codka Kalsoonida u qaado Xukuumada R/W Saacid
Muqdisho:-Ra’isal Wasaaraha DFS Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa maanta golaha Baarlamaanka DFS horgeyn doona Xukuumadda Cusub ee uu dhowaan soo dhisay Ra’isal Wasaarre Saacid kuwaas oo ka kooban 10 Wasiir .
Ra’isal Wasaare Saacid iyo M/weynaha DFS Xasan Sh Maxamuud ayaa wada dadaal ay ku doonayaan inay ku meel mariyaan Xukuumadan tirada yar ee ka kooban 10 Wasiir waxaana tan iyo shalay ka socday magaalada Muqdisho shirar gaar gaar ah kuwaasoo lagu sheegay in madaxweynaha DFS iyo R/W Saacid ay la yeesheen taageerayaashooda ku jira Baarlamaanka dowlada federaalka Soomaaliya.
Xildhibaano ka tirsan DFS ayaa qeylo dhaan ka keenay in la ansaxiyo xukuumada DFS ee uu horkacayo R/W Saacid iyaga oo sheegay in Dustuuriyan ay qalad tahay in la ansaxiyo xukuumada iyada oo aan la soo dhameystirin waxayna ka codsadeen in lagu soo daro xukuumada Wasiiro ku xigeen iyo wasiiro dowlayaal.
Magaalada Muqdisho ayaa taageerayaasha R/W Saacid waxay ku qabteen banaanbaxyo lagu taageerayo xukuumada Saacid waxaana ka codsadeen Xildhibaanada DFS in ay ansaxiyaab Xukuumada Cusub ee Soomaaliya.
Gudoomiyaha DFS Pro.Jawaari ayaa sheegay in maanta oo sabti ah codka kalsoonida loo qaadi doona xukuumada cusub ee Raisulwasaare Saacid waxaana ku sii qulqulaya xarunta golaha shacabka xildhibaanada DFS.